Xiisadda Qaza oo kacsan iyo Xamas iyo Israa’iil oo madaafiic is waydaarsaday | Dhexnimo Media
Home Wararka Xiisadda Qaza oo kacsan iyo Xamas iyo Israa’iil oo madaafiic is waydaarsaday
Mid ka mid ah ganatalada Falastiiniyiinta ayaa waxaa uu ku dhacay Dukaan ku yaalay magaalada Ashdod,XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS
Mid ka mid ah ganatalada Falastiiniyiinta ayaa waxaa uu ku dhacay Dukaan ku yaalay magaalada Ashdod,
Dagaal u dhaxeeya mintidiinta Falastiiniyiinta iyo Militariga Israa’iil ayaa laga soo sheegayaa marinka Qaza, ka dib xafladdii Washinton ka dhacday oo ay heshiis ku kala saxiixdeen laba dal oo kuwa gacanka Carbeed iyo Israa’iil.
Mintidiinta Falastiiniyiinta ayaa waxay labo Madfac ku rideen dhanka Israa’iil.
Mid ka mid ah gantaaladaasi ayaa waxaa u ku dhacay magaala xeebeedka Ashdod, halkaasi oo labo nin ay ku dhaawacmeen.
Falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale shalay 13 gantaal ku ganeen dhanka Israa’iil.
Militariga Israa’iil oo ka jawaabayay ayaa waxay duqeeyeen magaalada Qaza, gaar ahaa sida ay sheegeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda Xamas.
“Lama yaabani in argagixisada Falastiiniyinta ay gantaalo ku soo rideen Israa’iil xiilli xaflad taariikhi ah ay socotay,” waxaa sidaasi wariyayaasha Washinton ugu sheegay rai’isul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu.
Israel oo sheegtay inay burburisay saldhig ay leeyihiin Xamas
Waa sidee xaaladaha nolosha dadka reer Qaza?
Qaramada Midobay oo ka digtay xiisadda u dhaxeysa Falastiin iyo Israa’iil
Israa’iil ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsadeen kooxda Xamas
“Waxay doonayaan inay daba gadiyaan nabadda, taasina kuma guuleysanayaan,” ayuu intaa ku daray.
“Wan weerari doonaa qofkii gacan uu nagu waxyeeleynayo noo qaada, sidoo kale waan gaaraynaa ciddii gacan nabadeed noo fidisa.”
Xiisadda Qaza ayaa bilaabatay xilli Mr Netanyahu iyo wasiiradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka iyo Baxreyn oo heshiis nabadeed oo taariikhi ah ku wada saxiixday Aqalka Cad ee Mareykanka.
Mr Trump ayaa sheegay “in heshiiskan uu gundhig u yahay nabad waarta oo laga hirgaliyo guud ahaan gobolka “.
Previous articleSoomaali badan oo laga soo tarxiilayo dalka Mareykanka oo kusoo wajahan Muqdisho
Next articleNin dilaa ah oo markii toddobaad ka baxsaday Xabsi